Australia Travel Guide & Rwendo | A Couple for the Road
Australiya inowanzoonekwa ne-kwete-chaizvo-yeBritish accents, kangaroos uye doro raFoster, asi haugoni kufungidzira kunaka kwakanyatsojeka kwe nyika iyi yakasiyana-siyana kusvikira iwe wakazviona nemaziso ako. Imwe yenyika dzakachengeteka munyika yose, Australia inewo yakanakisa yemamiriro ekunze (kana iwe uchida kupisa), zvokudya zvakanyanya uye doro, kushamisira kwekunze kwekunze uye imwe yenyika dzakawanda zvikuru dzekuunganidza zvipenyu zvemhuka. Farira nguva yako pasi-pasi neaya mazano ekufambisa.
Guta guru: Canberra
Mari: Australian Dollar (AUD). ARS ikozvino 1.3 ye1 USD.
Power Adapter: MuAustralia mabheti emagetsi ndeyemhando yekutanga I. Mhepo yakakwana ndiyo 230 V uye inowanzonzi ndeye 50 Hz.
Verenga Zvakawanda Pamusoro peAustralia!
4 Spectacular yeAustralia Island Kuparadza Iwe Unongotadza Kupotsa
Kushanyira Australia chiitiko chinoshamisa. Tsika yakapfuma. Hushamwari hwevanhu. Zvitsuwa zvinokatyamadza. Mahombekombe akakwana. Muchokwadi, Australia's 50,000 km-refu-pamhenderekedzo pamusha kune whopping 10,000 + mahombekombe, zvisingatauri kuti iri zvakare kumba kune matani ezvitsuwa zvakanaka. Ndosaka zvisingashamisi, vafambi vanowedzera uye vachifamba kubva pasi rese vachibhururuka nemakungwa kuti vaone runako rwenyika ino. Kana… Read More
6 yeZvivako Zvikuru Zvokufamba muAustralia
Munyori Bio: Sam Ross anomhanyira blog thehammockhombre.com - bhuku rekufambisa rinotarisana nehuwandu hwemajw.org. Pamakore ekupedzisira e3, akafamba kumakondinendi ose, saka anonyora pamusoro penyika dzakawanda, maguta uye nzvimbo. Munhu wose akafamba muAustralia anokwanisa kupupurira kuti nyika iyi yakanaka kune mamwe mazwi. Vadikani vekunze zvikuru vari mumba ... Read More
Nzira Yokushandisa Sei 5 Mazuva Makuru muSydney
Sydney ndeyechokwadi yeimwe nzvimbo dzakanakisa dzinotaridzika dzinotyisa munyika, iyo iyo yose inofanira kushanyira kamwechete kamwe. Kunyange zvakadaro, dambudziko guru nekugadzirira rwendo rweSydney, kunyanya rimwe rinotora zvishoma kudarika 7 kana mazuva 10 nderokuti iwe uchasara pazviitiko zvizhinji zvinoshamisa. Izvi zvinoreva, kunze kwekuti iwe uchitarisira kuronga nzira yako kuitira kuti iwe ... Read More
Kuenda kuSydney: Mahara Kuenda, Zvokudya Kudya, Zvimwe Zvokutenga
Cate Palmer munyori, mufambi wenyika uye anozviti "guru geek". Masimi ayo eunyanzvi anogona kupfupikiswa kune mararamiro ehupenyu, mafirimu uye unyanzvi. Kufarira kwake kwakakura uye nguva dzose-kubuda, uye ndiye munyori we "Kuenda kuSydney: Mahara Kuenda, Zvokudya Zvokudya, Zvokushandisa Kutenga". Kuti uite Cate, tarisa Twitter peji rake kuti uwane mamwe mashoko. Sydney is ... Read More
Kufamba uye Rudo: 9 Best Helicopter Maenda Kune Vakaroorana Vakaroorana
"Kufamba uye Rudo: 9 Best Helicopter Maenda Kune Vakaroorana Vakaroorana" yakanyorwa naMaria Estrada, blogger uye mufambi. Anoda kunyora pamusoro penzvimbo dzaakange achienda uye kugovana zvimwe zvakaitika pamusoro pekufamba kwake. Mune nguva yake yekusununguka, anoverenga mabhuku uye anoona mafirimu ekuratidza. Kune vakawanda vakaroorana, kufamba kune chikamu chisingaverengeki cherudo, kunyanya kana ukasarudza kuenda kunzvimbo yekuenda ... Read More
Zvinhu Zvisingabhadhari Zvokuita MuSydney, Australia
Saka, mushure memakore ekufungisisa rwendo rwokuenda kuAustralia, uchiyera mari uye simba raunotora kuti ribhururuke pano, wakazviwana uine ndege dzinodhura uye zvino uri pano. Mikana iwe wave wakapinda muguta guru reAustralia; Sydney uye iwe hausi mukukurumidza kushandisa mari yakawanda kupfuura iwe. Chinhu chikuru pamusoro peSydney ndechekuti ... Read More